Saturday January 18, 2020 - 10:42:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay weeraro xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno katirsan gobolka Sh/Hoose.
sawir hore Meydadka ciidamada UPDF
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Qoryooleey ayaa sheegaya in xoogaga Al Shabaab ay xalay saqdii dhexe weeraro ballaaran ku mireen saldhigyo ay ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo kuwa dowladda ku lahaayeen deegaanada Mashallaay iyo Golweyn.
Weerarka koowaad oo lagu qaaday saldhigga ciidamada AMISOM ee deegaanka Mashallaay ayaa sababay dhimashada 4 askari Yugaandheys ah iyo Askari Soomaali ah, ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalka oo socday ku dhowaad hal saac uu saameyn ku reebay ciidamada shisheeye.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen dagaalyahannada Al Shabaab oo takbiirsanaya xilligii uu dagaalku socday, idaacadda Andalus ayaa baahisay in weerarka deegaanka Mashallaay ka dhacay lagu dilay Afar askari AMISOM.
Sidoo kale saldhigga ciidamada Uganda ee deegaanka Golweyn ayaa weerar xooggan kala kulmay xoogaga Al Shabaab, wararka ayaa intaas ku daraya in markii dagaalku soo idlaaday kadib ay ciidamada AMISOM madaafiic ku garaaceen dhul beereed ku dhow Qoryooleey balse lama oga khasaaraha ka dhashay.